ကစဉ့်ကလျား အိပ်ရာ – ချီရွန် ( ပုလဲ ) | PoemsCorner
ကစဉ့်ကလျား အိပ်ရာ – ချီရွန် ( ပုလဲ )
နဘေထပ် မက် မက်နေမိတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရယ်
ငါဟာ ဘယ်လို အရူးတယောက်ပါလဲ
ဖြေပါ … …. ..
ဖြေတယ်လို့ သဘောမထားဘဲ ဖြေပေးပါ
” ငါ၏ နှလုံးမျက်ဝန်းထဲ
ချစ်သူ့ ပုံရိပ်သာ ပျံဝဲစေအံ့ “
ငါ သန့်သန့်စင်စင် ဆုပန်ခဲ့ဖူးပါပြီ
ထိုသို့ဖြင့် နွေသည် ချိုမြမွှေးရီ
ဆောင်းတွေ တတောလုံး ဝေခဲ့ပြီလား
နွေကို မိုးသော လမ်းပူပူအား
လရောင်သည် သွေးတို့ဖြင့် ထုံလွှမ်း
ဒီခင်တန်းမှာ စကားသံ မဲ့စေ
မင်း ပျိုးကြဲခဲ့သော ဒီမြေတလင်းမှာ
ငါနဲ့ ငါ စစ်ခင်းရဦးမည်လား
မသေချာတော့ … … … …
ဆက်လျှောက်လျှင်လည်း ဒီလမ်းပဲ ရောက်
( ဖောက်ထွက်သော်လည်း ကောက်နေလိမ့်မည် )
ယဉ်ကျေးမှု မရှိသော အချစ်ကို
တခါတလေ အတုဟာ အစစ်ထက်
စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းတတ်တယ် မဟုတ်လား
ဒိုင်ယာရီတလျှောက် ခုတ်မောင်းသွားတဲ့ ရထား
ငါ့ကိုယ်ငါပဲ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဆဲနေလိုက်တယ်
ကဲ ငါ ဘယ်လောက် တော်သလဲကွယ်
ကိုယ်တိုင် မစိုက်ပျိုးခဲ့ဘူး ကောင်မလေးရယ်
ငါ့ တောင်ယာမှာ ဘာအပင်မှ မဖွံ့ဖြိုးဘူး
ဇာတ်လမ်းဆုံးမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးရ
ညရောက်ပြီလားလို့ အမေက မေးတယ်
အရုဏ်ဦးဟာ အလင်းတွေနဲ့ မှောင်တတ်တယ် အမေ
ကတိစကား အထပ်ထပ်တို့ ပျက်ပြိုကွဲအက်
ရင်ကိုယ် ရင်ချင်း သတ်တဲ့ကြိုးဝိုင်း
မူးနေတဲ့ ဓာတ်တိုင်ကြီးက ငုံ့ကိုင်းပြောတယ်
မီးပွင့်ကို ဆောင်းထားရတာ ပူလာပြီတဲ့
ကိုယ်ကတော့ ရယ်ရယ်မောမော ပြန်ဖြေမိ
ကြိုးတွေ မပြေခင်တော့ သည်းခံပေါ့ဗျာလို့
ဟိုး … .. အဝေးဆီက အော်သံကြား
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိုးစိုက်မိတဲ့ လှံတစင်းဟာ ငါပါပဲ
ကိုယ့်အခွံနဲ့ကိုယ် ပြန်မထနိုင်တဲ့ လိပ်
ကြယ်တွေကို ငေးငေးရီရီ ကြည့်ရင်း
မင်း ထိုးစိုက်ခွဲမဲ့ ငါ့ရင်အုံဟာ
ချစ်သူက ကမ်းသော ဓားဦး
ထိုဓားဖြင့်ပင် ငါ သေခဲ့ပြီ
အို … … လူသားအပေါင်းတို့
၃၄ မောင်းပြီး ပို့ပါလေ
ငါ ခပ်ရင့်ရင့် ကြေကွဲ
ချီရွန် ( ပုလဲ )
In: ကဗျာ Posted By: chiron Date: May 19, 2010 All Time
သုညလမ်း – ချီရွန် ( ပုလဲ )
ဆူးလူရိုင်း – ချီရွန် ( ပုလဲ )
ဝိဉာဉ်ကြွေ ……………… ( ချီရွန် ( ပုလဲ ) )
ဈေးသည် ထောင့်ချိုး ………………. ချီရွန် ( ပုလဲ )
Leave comment 26 Comments & 5,377 views
By: laypyay at May 24, 2010
By: puhtuzin at Jun 1, 2010
ဒိနေရာလေး ကြိုက်လို့ ယူမယ်နော်
By: favourite2me at Jun 14, 2010
ကြိုက်လို့ ယူတာက ယူလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကဗျာကို လေးစားသောအားဖြင့် ကဗျာရေးသူရဲ့ နာမည်နဲ့ ကဗျာရေးသူရဲ့ စကားလုံးကိုတော့ မပြုမပြင်ဘဲ ထည့်စေချင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တချို့သော ကဗျာမချစ်သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ခံရဖူးတာကြောင့် ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
By: chiron at Jun 14, 2010
By: cho at Aug 15, 2010
By: အသဲကွဲမိုး at Dec 9, 2011
ကျွန်တော်လည်း heart ထိတယ်ဗျာ ကိုယ့်ကဗျာ ကိုယ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့။ 😛
By: ChIr0N at Dec 9, 2011
nice both title & poem.
By: ei lay at Sep 19, 2012
By: အသဲကွဲမိုး at Oct 18, 2012
By: ei lay at Oct 18, 2012
မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ ကျွန်တော် ကူးလိုက်ပြီ….အထပ်ထပ် အခါခါပြန်ဖတ်ပြီး အထပ်ထပ် အခါခါ နာကျင်ရဦးမယ်ထင်ပါတယ်…
By: နိုးဆက် နေ့ at Jan 9, 2013
လမ်းမပေါ် လျှောက် မယ်ဆို …. .လမ်း မ ရဲ့ အကြောင်း အရင် သိအောင် လုပ် ….
အရမ်း လှတဲ့ဆော် ကို ကြိုက် ရင် ….. အရမ်းလှတဲ့ အိမ်ရှိအောင် လုပ် ….
By: ငစား at Jan 9, 2013
By: ei lay at Jan 18, 2013
ဒီကဗျာက တခါဖတ်ရင် တမျိုး ကျနော့်ကို ရသပြန်ပေးနိုင်တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါ။ ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ထဲက သဘောအကျဆုံး ၁၀ ပုဒ်စာရင်းမှာ ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေး နိုးဆက်နေ့။ အိလေးကတော့ ကျနော့်ကို ၃ မှတ်အောက် ပေးသွားတယ် ထင်ရဲ့။ =) .. စတာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
By: ChIr0N at Jan 18, 2013
အားပေးခဲ့ပါတယ် ကို ပုလဲရေ…၊ ကဗျာလေးကောင်းတယ်ဗျာ…..။
By: zawthetoo at Jan 18, 2013
ကျေးဇူးပါ ကို ဇော်သက်ဦး .. အားပေးသွားတဲ့အတွက် ( တကယ်က ကွန်မန့်တွေများပြီး လူအထင်ကြီးအောင် လျှောက်လိုက်ရေးနေတာ ) 😛 ။ ကျနော် အရင်ကဆို ပြန် မရေးတတ်ဘူးဗျ။ ရိုင်းတယ်လို့ ထင်မလား ကြီးကျယ်တယ် ထင်မလားတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး ပျင်းလို့ စာပြန်မရေးတာပါ။ 😀
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ပြန်ရေးတော့ ကွန်မန့်တွေတက်တာပေါ့ဗျာ… ဟဲဟဲ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကဗျာကွန်မန့်များအောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကျက်ထားတယ် 😀
By: n$n at Jan 18, 2013
Respect pay Dar phyit deatwat ei ka dot kyike de. 🙂
No reply so yin feeling out de. 🙁
“Msg” poh tar “no reply” so yae yae le le tinn de. 😛
By: ei lay at Jan 19, 2013
အရမ်းကောင်းတဲ့ စာသားတွေနဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါလား. ဆရာတာရာမင်းဝေကဗျာတွေကို ပြန်လွမ်းမိသွားတယ်ရှင်…
ကဗျာဆရာ… တော်တော်လေးကြိုက်လို့ ကွန်မန့်ပေးတာပါ. များလာအောင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော်
By: ရင်ဝှက်ပန်း at Jan 19, 2013
ကွန်မန့် ပေးတဲ့သူတွေကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ … ကျနော် စာပြန်လိုက်ရေးနေတာကို များလာအောင် တမင်လိုက်လုပ်နေတယ်လို့ နောက်တာပါ။ အားပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရင်ဝှက်ပန်း
By: ChIr0N at Jan 20, 2013
ပိုအားပေးရာ ရောက်အောင် ဖွပစ်ပါမည် 😀
By: မေပျို at Nov 13, 2013
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ညာ .. ရပါတယ် ကလေးမရယ် ဒီလူနဲ့ ဒီလူ .. ဖွပေးတော့လည်း ကျေးဇူး ပိုတင်ရမှာပေါ့။ =)
By: ChIr0N at Nov 14, 2013
ကဗျာက သေချာဖတ်လေ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံထားပြီး ရေးထားလေ ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီး ကိုချီရွန်….ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ဖို့များတယ်ထင်တယ်…..:)
By: ap at Nov 14, 2013
မနေ့ကပဲ Facebook ထဲမှာ ရှင်းပြထားတယ်လေကွာ .. ရေးတုန်းကတော့ အာရုံရတာ ရေးခဲ့တာပဲ။ ဘာရယ် ညာရယ် မဟုတ် စိတ်ထဲ ပေါ်လာတာလေး ရေးထားတာပါ။ နောက်တော့လည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရွှီးပြနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ဟုတ်တာ မဟုတ်တာထက် ငါ့ စိတ်ထဲ တကယ်ရှိတဲ့ဟာ ရေးထားတယ်ဆိုတာတော့ အာမခံပါတယ်။ 🙂